Fivoriana isam-bolan’ny Faritra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Teo anivon’ny Faritra:
- Nitondra fanazavana mikasika ilay antonta-kevitra “Prospective sur l’avenir de Vakinankaratra en 2035” ny Lehiben’ny Faritra, nandritra ny herinataona ny fanagonan-kevitra, natolotra teto Antsirabe ny 02 febroary ny boky ary nentina teo amin’ny sehatra Nasionaly ny 04 Febroary lasa teo.Mpiara-miombon’antoka ny AFD, ny CIRAD, ny IISS
- Notaterina teto ihany koa ny fitsidihan’ny mpiraki-draharaha Indonezianina teto amin’ny Faritra ny fiandohan’ny herinandro teo, efa mazava ny fiaraha-miasa misy ireo fohy ezaka ho vitaina ato anatin’ny 3 volana ary ny lavitr’ezaka hisehatra amin’ny famokarana, fandraharahana ary ny angovo azo havaozina.
- Ny 17 hatramin’ny 19 Febroary 2016 dia handray delegasionina avy any amin’ny banque Mondiale ny Faritra Vakinankaratra
- Mahakasika ny foara lehibe Z’ovy dia ny 13 hatramin’ny 16 Mai izao no heverina hanatontosana azy, hirindran-dalana amin’ny fetin’ny pentecôte.
- Nampatsiahivina teto ihany koa ny rafitra GTR “Groupe de Travail regional” efa miasa io rafitra io ary mandray anjara feno amin’ny fiatrehana ny fampandrosoana, ity rafitra ity no isann’y hamolavola ny “foire Z’ovy andiany fahatelo”
- Mikasika ny “sale d’Opéraion et de suivi” eo anivon’ny Faritra dia ny volana Mars izao no hanomboka amperinasa ity ivontoerana ity.
- Nasiandresaka sy fanazavana teo ny mikasika ny FIB na ny “Fiche individuelle des bovidés”
- Hisehatra amin’ny fanabeazana indray ny fiaraha-miasan’ny Faritra Vakinankaratra amin’ny Principauté de Monaco ka hanomboka izany ny fanolorana solosaina 5 ho an’ny CEG Ivohitra.
Teo anivon’ny Prefektiora:
- Manentana ireo sampandraharaham-panjakana rehetra mba handefa ny tatitry ny asa tamin’ny 2015 satria hatreto dia mbola vitsy ny nahavita izany.
- Ohatra tsara ho an’ny Madagasikara iraimanontolo ny ezaka fanadiovana ny karaoke eto Vakinankaratra.Ireny toerana ireny mantsy no lasa fototry ny fitaizana ratsy ho an’ireo ankizy tsy ampy taona, sy hiaingan’ny filandratsy rehetra.
- Hentitra ihany koa ny Prefektiora ankehitriny amin’ny fanaraha-maso ireo teratany vahiny monina sy mipetraka ato anatin’ny faripiadidiana Vakinankaratra.
- Nampatsiahivina teto ihany koa fa hatramin’ny 31 Mars no fepotoana farany fanavaozana ny fitanana basy ka tokony hanao izany ireo sivily rehetra manana izany.
- Eo amin’ny tohana ho an’ny fampandrosoana atao aminn’y vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana dia hanao ezaka eo amin’ny tontolon’ny fizanhantany sy ny fanapariahana ny fitsipi-pitondra ten any ao anivon’ny prefektiora sy ny ofisim-paritry ny fizahantany.
- Mikasika ny famoriam-bahoaka eny andalam-be 5 andro mialohan’ny fotoana no tokony hotonga eny amin’ny Prefektiora ny fangatahana fahazoan-dalana.Tsy tokony hanomboka ny dokam-barotra amin’ny hetsika samihana raha tsy efa nahazo alalana ny mpikarakara hetsika iray.
DRPAS: Antsirabe no handray ny fanamarihana amin’ny fomba ofisialy ny andron’ny vehivavy 8 mars, raha efa avy nitety distrika ny fanamarihana izany.Hisy ny fivoriana fanomanana izany ny alarobia 10 febroary tolakandro ao amin’ny faritra Vakinankaratra.Ny sabotsy 05 hatramin’ny talata 08 Mars dia hisy hatrany ny hetsika.
BRSP: efa mivoaka ankehitriny ny fampahafantarana fa hisy fifaninana handraisana Inspecteur de Police 100 sy “Agent de police 600 ato ho ato.Mpianadraharaha polisy miisa 24 no hanao stage eny anivon’ny sampandraharahan’ny fitandroana ny filaminana manomboka izao.
ORTVA: Mbola mitohy ny fampahafantarana eny anivon’ny distrika ny fampahafantarana ilay fitisipi-pîtondran-tena isorohana ny fizahantany mamoafady miseho amin’ny ankizy tsy ampy taona.
DISTRIKA AMBATOLAMPY: Misedra olana ny Distrika amin’ny bokin’omby noho ny fisihan’ny tsy fanarahan-dalana ataon’ny Distrika mifanolo-bodirindrina.
DREN: Contrat ho an’ny maître FRAM miisa 185 no nozaraina teto Vakinankaratra ary nanolotra izany no atondian’ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena nandalo teto.Tablette 200 isa no atolotra ho an’ny lycee Andranomanelatra, Betafo, Faratsiho ary Ambohimandroso.Televizionina miisa 43 no anjaran’ny DREN Vakinankaratra ka iretsy farany no handamina ny fizrana sy ny hampiasana azy. Nahangona 10 717 970 Ar sy fotsim-bary 250 kg ny fianakaviamben’ny fanabeazam-pirenena teto Vakinankaratra. Ny 17-18 Febroary 2016 no hanamariaha ny andron’ny sekoly ary hetsika ara-kolotsaina sy fantanjahantena ary fikolokoloana ny zava-boary no atao amin’izany.
SRAT: Hivoaka ato ho ato ary ho raisin’ny MEPATE an-tanana ny tolo-barotra mikasika ny fanamboarana ho pavet ny lalana mihazo ny seranam-piaramanidina Antsirabe
DRJS: Hisokatra indray ny FIJ n any” Fond d’Insertion des Jeunes » ka misokatra ho an’ny tanora rehetra aty vakinankaratra ny faha 15 Avril no fara-fanaterana ny tetikasa.
Sampana Serasera Faritra Vakinankaratra